Shiinaha Square birta qabow ee jiingadda leh ee birta birta kulul ee la duubay birta 3-250mm warshadaha iyo soosaarayaasha | Huayi
Birta labajibbaaran waxaa loo qaybin karaa rogid kulul iyo duudduub qabow; Dhererka dhinac ee birta kulul ee duuban ee duuban waa 5-250mm, iyo tan birta labajibbaaran ee qabow waa 3-100mm. Birta qabow ee la soo jiiday waxay ku jirtaa xaalado heerkulka caadiga ah, iyadoo culeyska ciriiriga ah uu ka badan yahay awoodda dhibicda dhalidda asalka ah ee birta birta ah, waxay si qasab ah u fidisaa birta birta si ay u soo saarto qaab -dhismeed caag ah, si loo hagaajiyo xoogga dhibicda dhalidda ee biraha birta iyo badbaadinta birta. Kadib waxay adeegsanaysaa tikniyoolajiyadda fidinta qabow si ay uga soo saarto dhammaan noocyada birta wareegsan, birta laba jibbaaran, birta fidsan, birta laba-geesoodka ah iyo birta kale ee qaaska ah oo leh sax sare iyo dusha siman iyada oo loo marayo caaryada saxda ah. Birta labajibbaaran ee kulul ee la duubay waxaa loola jeedaa birta la duubay ama loo farsameeyay qaybta laba jibbaaran.
Darajada biibiilaha birta Q235, Q345, A3, S45C, 1045
Qiyaasta dhererka dhinac Kuleylka kulul waa 5-250mm, qabow la sawiray waa 3-100mm.
Farsamo La duubay / Qaboojiyay Sawir
Dusha Rinjiyeynta madow, rinjiga varnish, saliidda miridhku, galvanized kulul
Faahfaahinta Baakadaha In xidhmooyin ku xidhan xariijimo bir ama sida codsi
Shuruudaha Bixinta T/TL/C marka la arko
Muunado Muunado bilaash ah ayaa la bixiyaa laakiin xamuulka waxaa bixiya iibsadaha
Birta labajibbaaran waxaa inta badan loo adeegsadaa dhismaha iyo qurxinta.
Hore: Dhuujinta kulul dhuunta galvanized biibiilaha birta dareeraha cadaadiska hoose Q235 A106 A53
Xiga: Biraha birta ah ee qaaska ah ee barbaro leh ee birta laba geeslaha ah A3 1045 q23545#
Aisi 304 Bar birta aan lahayn
Bar adag Hexagon Steel Bar
Bar Bar Square
Bar aan lahayn
Flat Bar High Carbon Steel Flat Bar Fudud Steel ...